FJKM Ampahibato Firaisana: Toriteny 2016 01 17
FJKM Ampahibato Firaisana : Toriteny 2016 01 17
Amin'izao fotoana sarotra mampitaraina antsika rehetra izao, dia maro no tsy manao zavatra amin'ny fo fa manao kajikajy; raha misy tombontsoa ho an'ny tena vao manao zavatra anankiray ny sasany! Fahita izany amin'ny alahady toy izao : be dia be ny olona no mandeha mivarotra eny an-tsena, satria any am-pivarotana no ahitana tombom-barotra, fa aty am-piangonana kosa tsy misy vola hozaraina. Manao fihetsiketsehana ny mpivarotra amoron-dàlana ao Antananarivo ao, satria misy tombontsoa ho azy ny fihetsiketsehana izay ataony dia midina an-dàlambe izy. Inoana fa raha tsy misy izany tombontsoa andrandraina izany tsy misy ny manaraka ireny fihetsiketsehana ireny. Hatrany an-tokantranontsika any, misy ny ankizy no manaiky ny lehibe rehefa eo imaso, satria mikajikajy izy hoe rehefa mankatό eo anatrehan'i Dada sy Neny dia mety mitombo ny gouter azo ... Hita amin'izany fa mahazo vahana tokoa izany toe-tsaina hoe raha tsy misy tombontsoa aho tsy hanao, hatrany amin'ny lehibe ka hatrany amin'ny kely ..
Eto amin'ity perikopa anio ity, be dia be ny vahoaka mitady an'i Jesoa Kristy. Mahavita mijanona teo amoron-dranomasina izy ireo, ary rehefa tsy nahita an'i Jesoa teo izy dia nifanentana niampita niondrana an-tsambokely. Ireto vahoaka ireto dia vahoaka niala ny tranony, nandao ny asany, nanao ho zava-dehibe ny fitadiavana an'i Jesoa ka nandany andro nandany fotoana ho amin'izany. Kanjo rehefa jerena ny tohin'ny tantara : hay tsy noho ny famantarana nataon'i Jesoa fa noho izy ireo voky. Ny omalin'io mantsy dia nisy an'ilay i Jesoa namoky olona tsy omby telo arivo, tamin'ny alàlan'ny mofo sy hazandrano vitsy dia vitsy kanjo nitombo be nahavoky ny rehetra ary mbola nisy ambiny maro. Mazava be izany fa hay mitady an'i Jesoa Kristy ireto olona ireto satria misy tombontsoa noeritreretiny tao : mitady sakafo, mitady hanina ho an'ny nofo. Tsiahivina fa zanatany rômanina i Jerosalema tamin'izany fotoana izany, miaina ao anaty fahasahiranana ny vahoaka, miasa mafy dia mafy vao mahazo sakafo : ny hohanina anio tadiavina anio. Ka dia izao no nanainga ireto vahoaka ireto hitady ny Tompo : "Mirodorodo mankany amin'i Jesoa isika dia mahazo sakafo, tsy miasa dia mahazo sakafo". Izay tombontsoa izay no novoizina tamin'ireto vahoaka ireto. Jereo anie ny fiantsoany an'i Jesoa : "Raby ô, oviana no tonga teto ianao?" Tsy fitiavana an'i Jesoa noho Izy nanome famonjena fa noho Izy nanome hanina nahavoky.
Isika ireto re sao dia misy toy izany : handeha hivavaka mba hanan-karena, hitady fanasitranana, hahazo amin'izay zavatra zarazarain'ny Fiangonana? Mirongatra tokoa ny karazam-piangonana mampanantena an'izany tombontsoa samihafa izany. Ary tsy gaga ihany koa isika, raha misy any amin'ny fiangonana hafa any ny re hoe mpivavaka mangalatra rakitra. Misy koa amin'ny tanora ny tonga mandeha miangona satria betsaka tovovavy na betsaka tovolahy any. Misy hira malaza izay hoe "Harmonia" ny lohateniny, dia ahatsapanao an'izany olona mandeha mivavaka noho ny fitiavana ara-nofo fa tsy hanompo an'Andriamanitra.
Fa izao : bedin'i Jesoa ireto olona ireto. Tsy ny mofo katsahinareo no mahavelona sy mahasoa, hoy Izy, fa ny fanjakan'Andriamanitra no tokony hokatsahinareo aloha. Rehefa tsapanao ny halehiben'ny fanjakan'Andriamanitra mamonjy anao, dia hitarika anao ny Tompo ary hanome ho anao izay ilainao. Ny zava-dehibe aloha dia ny hiasanao ho an'Andriamanitra, ny hanompoanao azy amin'ny fifaliana. Mahavariana fa izay heverina hoe asa kely indrindra atao aty am-piangonana dia ny mihira, nefa indraindray hita misy kamo mihira isika mpivavaka. Tsy izany ihany anefa fa be dia be ny asa atao ato anatin'ny fiaraha-mivavaka : mihaino vaovao, mihaino fanentanana, mihaino toriteny, ... Mipetraka ny fanontaniana : hiasa ho an'i Jesoa Kristy ve no nahatongavanao aty am-piangonana?
Rehefa zohiana ny tohin'ny tantara, dia nanontany an'i Jesoa ny asan'Andriamanitra ireto olona ireto.
Rehefa miasa amin'ny fo sy amin'ny faharesen-dahatra, amin'ny fifaliana ianao rehefa manatanteraka ny asan'Andriamanitra, dia hotahian'Andriamanitra ho azy. Ny fanompoana ny Tompo no hanetsehan'i Jesoa Kristy anao androany, fa rehefa manao izany tsara ianao, hanaraka ho azy ny fitahiana. Tsy tokony ho ny mifamadika amin'izay, ka hoe ny fitahiana aloha no karohina sy apetraka ho fepetra hanompoana sy hiasana ho an'i Jesoa Kristy. Raha sanatria mety hoe iainanao ankehitriny izany hoe tsy manao raha tsy misy tombontsoa, mananatra anao ny Tompo anio mba hiova amin'izany. Tsarovy fa famindram-po lehibe ny mbola ahavelomantsika, zanaka malala eo imason'ny Tompo isika, dia tiany mba hanahaka an'i Jesoa hiasa amin'ny fanomezam-boninahitra amin'ny zavatra rehetra. Mampahery antsika ny Tompo mba ho olona matahotra an'Andriamanitra tokoa isika.